Ukusetshenziswa kwamanzi ncibilikisa, noma kanjani ukuba zidonse ebusheni babo.
Njengoba yaziwa, umzimba womuntu, amanzi amaphesenti angaphezu kwamashumi ayisikhombisa kanye lemali yayo kuphela ubudala kuwo incipha. Ngakho-ke, ukuze kudlule isikhathi eside ukuze kulondolozwe ubuhle kanye nentsha badinga isikhathi restock nokuhlanza amanzi ziwusizo ikakhulu emzimbeni. Ukusetshenziswa kwamanzi ncibilika kwatholakala ezikhathini zasendulo ososayensi yesimanje isikuqinisekisile ukuthi isakhiwo salo efanayo kakhulu uketshezi eziqukethwe emangqamuzaneni omzimba womuntu, futhi ngenxa yalokho, kuyinto uketshezi zemvelo enhle ukugcwalisa kubo.
Ukusetshenziswa kwamanzi ncibilika kuqukethwe ukwakheka kwama-molecule ayo. Ziyakwazi izinhlayiya ezincane kakhulu amanzi evela kweminye imithombo, futhi ngenxa yalokho, kulula kakhulu ukuba zingene ulwelwesi cell, ngaleyo ndlela kwande umzimba wonke umzimba futhi ekunqandeni ukuguga yayo. Imbangela enkulu ka ukuguga ngaphambi kwesikhathi, ngokososayensi, ukushonelwa izakhiwo umzimba ukugcina umswakama. ukuthengisela okuphansi lamanzi emzimbeni kungabangela izifo ezihlukahlukene. Amanzi - umthombo wokuphila, kodwa amanzi ehlanzekile ezisebenzisekayo - umthombo wezempilo futhi intsha iminyaka eminingi, ngakho kufanele wenze kube umthetho ngokwami ukuphuza uhlobo emangalisayo amanzi nsuku zonke. Mayelana ihora ngaphambi kokudla, baphuze eyodwa noma ezimbili izibuko zokwelapha amanzi. Ezinsukwini ezimbalwa nje-ke kuyoba obonakalayo ngcono eyakhayo futhi okuphawulekayo empilweni.
Kwezinye izimo, ukusetshenziswa kwamanzi ncibilika kuyadingeka kakhulu? Lena indlela engcono kakhulu yokulwa nokukhuluphala ngokweqile ngokwenza ngcono umzimba futhi ukuqedwa okusheshayo kusuka umzimba ubuthi kanye neminye imikhiqizo imfucuza. Kulabo unezinkinga esimiso senhliziyo nemithambo yegazi, amanzi okunjalo kuyoba umthombo wokuphila, kunciphise amazinga cholesterol, ekuthuthukiseni igazi normalizing yonke inhliziyo. Ngenxa okwelapha amanzi ncibilikisa kungaba ngokuphawulekayo ngcono izivikeli mzimba, ngaleyo ndlela kwande ekhonweni lomzimba lokukwazi ukulwa nezifo eziningi ezimweni ezicindezelayo. Futhi izingane kuyoba amandla onamandla wapha kahle kunzima ukuqeqeshwa umsebenzi.
Kubalulekile ukuba acabangele yokuthi amanzi kumele kusetshenziswe ngokushesha, njengoba emva 4-5 amahora zonke izakhiwo zawo zemilingo elahleka. Ukuze ulungiselele lokhu amanzi ukuphulukisa, singasebenzisa izindlela ezimbalwa ezilula, zonke kufanele bacabangele ukunemba senqubo yokukhiqiza, esebenzisa khona amanzi ncibilikisa eyatholakala. Ukulimala umzimba kungabangela yokuhlanza elingalungile noma enganele okokuqandisa yayo. Indlela elula - iyona ukuncibilika kweqhwa, kanjalo ukuthola amanzi ncibilika. Umonakalo lapha ungafaka isicelo uqweqwe elincanyana okuqinile, equkethe i admixture we amanzi esindayo. Futhi ukhululeke ukusebenzisa ingxenye yawo esele ingabe ukuthola ncibilika manzi acwebe njengekristalu kuyadingeka ukuze asuse ungqimba phezulu iqhwa primerzshego, nje amamilimitha angu ambalwa. Ngokufanayo, indlela efanayo kungenziwa kuhlanzwe futhi uzilungiselele okufika amanzi. Imfuneko kuyinto okokuqandisa okusheshayo amanzi nahlanza usebenzisa efrijini futhi incibilikiswa kancane emazingeni okushisa okuvamile. Sebenzisa meltwater ube mkhulu uma ukudala ngokuhlela ukuhwebelana amaningi besesimweni ashisayo kuyodlulela bese ibe iqhwa. Ngenxa yalesi kubalulekile ukuxoxa amanzi nahlanza e ukuhlunga ngaphambi ukwakheka bubble wokuqala, bese selehlile futhi simisiwe. Ingozi ancibilike amanzi kungenzeka endabeni uma ulwazi ekuwulungiseleleni belingaphelele noma ayilungile, noma uma lowo muntu wenza iphutha inqubo. Ngakho, ngaphambi kokuba uqale okwenza kube ngempela ngokuyisimangaliso ukuphulukiswa isiphuzo, kufanele bafunde ukwaziswa ngangokunokwenzeka ngale ndaba.
Futhi ungakhohlwa ukuthi ukusetshenziswa kwamanzi ncibilika ayixhomekile kuphela elisetshenziswa, okungenani lapho kukuhle futhi ngezinhloso ayeyisimonyo. Ukugeza amanzi ephulukisa kungaba uyifinyelele imiphumela amazing, nihlambulule isikhumba futhi ususe imibimbi ngisho ezijulile.
Izindlela umshini ohlanza amanzi
Amanzi Sassi: yini inzuzo sibalo enendawo?
Black izinzuzo itiye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka
Indlela ukunciphisa okuqukethwe kwama-kilojoule of amazambane athosiwe
Izikhangibavakashi Perm. Hamba ngokusebenzisa "Line Green"
Izinhlobo izindevu - ukhetha uphawu ngobudoda, amandla nokuhlakanipha namandla!
Ihhotela Pinero Bahia de Palma (Spain / Mallorca): izithombe kanye nokubuyekeza
Indlebe lehla "Otipaks": yokusetshenziswa
Iplanethi kulencane zesimiso sonozungezilanga. Cold hhayi ashisayo ...
Pasta Bolognese Recipe Izitsha isiNtaliyane
Umama nomalokazana nendodana. ubudlelwano Umkhaya